Maxkamada ciidamadda Soomaaliya oo dil toogasho ah ku xukuntay mid kamid ah shan qof oo loo heystay qaraxii Zoobe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamada ciidamadda Soomaaliya oo dil toogasho ah ku xukuntay mid kamid ah shan qof oo loo heystay qaraxii Zoobe
February 6, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha maxkamada Gaashaanle Xasan Nuur Cali Shuute. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamadda Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah dil toogasho ah ku xukuntay mid kamid ah shan qof oo loo heystay qaraxii Zoobe, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada Gaashaanle Xasan Nuur Cali Shuute.
Labo qof oo kale ayaa maxkamadda ku xukuntay xabsi. Sidoo kale labo eedaysane oo kale ayaa maxkamaddu fasaxday kadib markii wax dembi ah lagu waayay.
In ka badan 500 qof ayaa ku dhimatay qaraxii ka dhacay iskoyska Zoobe ee Muqdisho 14-kii Oktoobar, 2017, kaasoo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa oo ka dhaca Soomaaliya.
October 14, 2018 Nin kamid ah kuwii ka dambeeyay qaraxii Muqdisho oo toogasho lagu fuliyay iyada oo la xusayo sanadguuradii kowaad ee weerarka
March 29, 2018 Haayada ICRC oo sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho